ပိုးဟပ်များကြောင့် ရနိုင်သော ကျန်းမာရေးပြဿနာများ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ပိုးဟပ်များကြောင့် ရနိုင်သော ကျန်းမာရေးပြဿနာများ
>> ပိုးဟပ်ကြောက်တတ်သူများ ရှိသလား?
ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အိမ်များနဲ့ ပိုးဟပ်တွေဟာ ခွဲခြားမရနိုင်ပါဘူး။
ပိုးဟပ်တွေဟာ ခပ်သေးသေးအကောင်ငယ်များသာ ဖြစ်သော်လည်း လူတော်တော်များများကို အထိတ်တလန့် ဖြစ်စေပါတယ်။ အိမ်တိုင်းလိုလိုမှာ ပိုးဟပ်တွေရှိတာမို့ ဒီလိုပိုးဟပ်တွေနဲ့ နီးနီးနားနားနေခြင်းကြောင့် ရောဂါများ ရနိုင်သလား မေးဖို့ရှိပါတယ်။
အဖြေကတော့ ဝမ်းသာစရာပါပဲ။ ပိုးဟပ်တွေက လူတွေနဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကို ကိုက်ခြင်း မရှိပါဘူးတဲ့။ သူတို့ရဲ့ပါးစပ်က အချွန်အဆူးတွေကလည်း လူတွေရဲ့အရေပြားကို ထိုးဖောက်နိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အချိူ့ကလေးငယ်တွေ ညအိပ်ခါနီး မုန့်စားရင်း အိပ်ပျော်ခြင်းကြောင့် မုန့်အစအနတွေကို လာချီရင်း ကိုက်ခြစ်မိတာမျိုး ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။
>> ပိုးဟပ်ကနေ ဘယ်လိုရောဂါတွေ ကူးစက်နိုင်သလဲ?
ပိုးဟပ်များရဲ့ အစာအိမ်နဲ့အူထဲမှာ ပိုးမွှားများစွာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ပိုးဟပ်တွေ မစင်စွန့်တဲအခါ ထိုပိုးမွှားတွေ အပြင်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်ပြီး အချို့က ရောဂါဖြစ်စေတတ်သလို အချို့ကတော့ မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။
ကျွန်မတို့ရဲ့ မီးဖိုချောင်၊ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ စသောနေရာတွေမှာ ပိုးဟပ်တွေ အနေများတဲ့အတွက် နောက်ဖေးမီးဖိုချောင် ဝင်ပြီးတိုင်း လက်ဆေးတာမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ်။ ပိုးဟပ်တွေဟာ ညစ်ပတ်သောအရာများပေါ် နားလိုက် မီးဖိုချောင်ထဲ ပြေးလိုက်လုပ်နေတတ်တာမို့ သူတို့ကိုယ်ပေါ်က အညစ်အကြေးနဲ့ ရောဂါပိုးမွှားတွေကို လိုက်ဖြန့်နေသလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပြင်းထန်ပိုးမွှားများကို သယ်ဆောင်ထားသော ပိုးဟပ်တွေရှိပါက ကျန်းမာရေးကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အချုပ်ဆိုရရင်တော့ ပိုးဟပ်တွေက လူတွေကို မကိုက်နိုင်ပါဘူး။ သို့သော် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေမယ့် ပိုးမွှားတွေကို သယ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့အတွက် အိမ်ကို သန့်ရှင်းအောင်ထားခြင်း၊ ပိုးဟပ်များကို ရှင်းလင်းခြင်းတို့ ပုံမှန်ပြုလုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။